Buy ဝမ်းဆက်ခေါင်းစွပ် hoodiesဘောင်းဘီ ဂါဝန် (5,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ဝမ်းဆက်ခေါင်းစွပ် hoodiesဘောင်းဘီ ဂါဝန်
ရောင်းချသူ: Anna Suzen Moh
ကဲ ဝမ်းဆက်လား ?
ခေါင်းစွပ် hoodies လေးတွေ မျိုးစုံရမယ် ။
ဂါဝန် အလန်းလေးတွေလား ?
Quality -A ပဲနော် ။
အရမ်းတန်တဲ့ဈေး / အသားကောင်းလေးတွေကို ၅၀၀၀ နဲ့ဆိုတော့ ~~~
အပြင်မှာတောင်မရနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းပေးနေပြီနော် ။
ကဲ အရမ်းတန်လွန်းလို့ မြန်မြန်သာမှာလိုက်ကြတော့နော် ။
ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက 09782729100 / cb
oS စလုပ်ချင်တဲ့ သူများအတွက်လဲ သီးသန့်ဈေးနှုန်းလေးတွေရှိပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စာူပါက 09782729100 / cb သို့ လာရောက်စူံစမ်းနိုင်ပါတယ် ။
အမည်: ဝမ်းဆက်ခေါင်းစွပ် hoodiesဘောင်းဘီ ဂါဝန်